Kugovera kweAfrica nemaEuropean kumusangano weBerlin - Afrikhepri Fondation
Berlin musangano 1885
Kugovana Africa neEuropean kumusangano weBerlin
Lmusangano weBerlin, wakaitwa kubva munaNovember 1884 kusvika Kukadzi 1885, wakarongedzwa naChancellor Bismarck kuitira kuti vagadze mitemo yaifanira kutonga hutongi hweAfrica. MaBritish, maFrance, maGerman, maBelgian, maPutukezi, maItaly vakapinda mukati meAfrica, iyo yakagovaniswa nevaEuropean mukati memakore asingasviki gumi nemashanu, pamubhadharo wehondo dzakanangana nehumambo hweAfrica uhwo hwakaguma hwakundwa ...
Iyo balkanization ye Africa yakaitwa mukuzvidza vanhu, tsika nemitauro neanarchic kupatsanura kwemakoloni masimba. Colonisation yakamisikidzwa nechisimba: Chitendero chitsva chakaiswa, mutauro mutsva wakaiswa, tsika nyowani yakamisikidzwa ... Kuzivikanwa kwevanhu vemuAfrica kwakadzikira zvishoma nezvishoma kusvika pakusaziva. uye ndigadzire nayo.
Balkanization yeAfrica isati yasvika (KaMa) muna 1885, vanhu venyika ino vaigara mukuwirirana (izvo hazvireve kuti pakanga pasina hondo asi kuti zvinhu zvaitongwa nehurongwa) muumambo ane miganhu yechisikigo yakatsanangurwa nemapoka emadzinza akaumba humambo uhu. Nyika dzazvino dze Africa dzine miganhu yekugadzira yakadhonzwa uye inodiwa necolonizer ndeyekupokana uye haina basa uye haigone kuvimbisa kutendeka kwevanhu uye kugadzikana kwematunhu.
Kune marudzi mazhinji emadzinza anozviwana ivo vakapatsanurana, vachirarama mukudengenyeka pasi pemitemo kakawanda inopesana nekubudirira kwemitemo yavo. Mhedzisiro iyi inowedzera kuwirirana kwemagariro evanhu uye kusagadzikana zviri kuitika zvakanyanya, zvichiita kuti zvisiyane nekufambisa kweAfrica, nyika inogara kune imwe yenyika yakawanda pfuma.
VaAfrica vanotukwa here? HAPANA, maAfrica haatukwe!
Ivo vakaparadzaniswa, vakapatsanurwa sezvakaita kondinendi yavo. Pasina kuzviziva, ivo vakarasikirwa kuzivikanwa kwavo, iyo quintessence yekuve kwavo. Nekuti, nhoroondo yekusununguka kweAfrica inofananidzwa nemufananidzo wemuranda akasunungurwa uyo, achiona ngetani dzake dzabviswa, anozvitenda akasununguka achiri kusungwa muchitokisi chisinga batike: icho chemamiriro.
Kuti azvisunungure, iye wemuAfrica anofanirazve kukunda uye kuitisa zvekare nhoroondo yake, nhoroondo yakanganwika uye yekunyepedzera uko munhu mutema (Kamite) panguva imwechete airemekedzwa, achitya uye achikudzwa (saMwari) nekuti akabata tarisiro yesainzi uye ruzivo uye zvekunamata. Iko chaiko kuvharirwa kweAfrica hakuzi kwemuviri (balkanization muna 1884-1885) asi zvepfungwa (kusaziva) nekuti Munhu ari kunetsana naye haatarisiri kusunungurwa zvachose kwehupenyu hwake.
Chikamu cheAfrica, 1880-1914
9 yakashandiswa kubva ku32,77 €
Tenga € 32,77
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Kubvumbi 11, 2021 3:00 PM
Iwo mashiripiti ezvekurapa zvinotsanangurwa naDr Aka Félix (Vhidhiyo)
Kuenda wakasununguka kumatambudziko - Eckhart Tollé (Audio)
Ichokwadi Nezve Gaddafi (Vhidhiyo)
Watch Aya by Yopougon (2013)
Ndivanaani vaiva Quamina naJack Gladstone?